Volotsangana ho fitaovana ho an'ireo sary sokitra bibikely marefo ireo. Famoronana an-tserasera
Ireo sary sokitra marefo an'ny bibikely vita amin'ny volotsangana
Ny matsiro azon'ny talenta omena, tahaka ny mitranga eo amin'ny tontolon'ny sarimiaina Japoneyary ny fahendrena momba ny fifehezana teknika kanto manokana, azonao atao ny manome fisolo tena mahafinaritra an'ireo karazan-javamananaina tsy manam-petra izay monina eto amin'ity planeta ity.
Ilay artista japoney Noriyuki Saitoh dia milalao an'io sakafo matsiro io ka amin'ny tànany no hitarihany antsika amin'ireo sary sokitra tsara tarehy bibikely vita amin'ny akora hafahafa tena miavaka. Ireto sary sokitra tena kely ireto dia mahavita mitaona antsika ampy hamela antsika hientanentana kely amin'ny fahaizan'i Saitoh kanto kanto.
ny sasany sary sokitra miaraka amin'ny antsipiriany maro ary ny tsirairay amin'izy ireo dia afaka mampiseho amintsika ny atao hoe dragonfly, mantis mivavaka na lolo iray ihany. Raha mifantoka amin'ny antsipiriany ny olona iray, dia afaka mahita ny fahaizana lehibe amin'ny fampiasana volotsangana izy mba hahafahany manao ireo galeraky ny sary rehetra mamela antsika tsy hiteny.
Ny tanjon'i Saitoh sy ny ekipany dia misolo tena an'ireo bibikely ireo amin'ny habeny voajanahariny. Mamerina ny sary sokitra amin'ny habe mitovy izy ireo, na dia avelany aza ny ampahany hitendry zavakanto bebe kokoa noho ny zava-misy tsirairay amin'ireo lolo asehon'izy ireo amintsika ao amin'ny repertoire misy bibikely.
Raiso ny fandrefesana marina an'ireo invertebrate tsirairay avy mahay manao sary miaraka amin'io fitaovana io toy ny volotsangana, hifanindriana ka hahita bibikely tena fantatry ny besinimaro isika rehetra.
Tonga hatrany aza afaka misavoritaka mahita ireo pitsopitsony ireo fa manome antsika ny fahatsapana fa miatrika asa-kanto kely izahay, fa tsy tena zavamiaina izay afaka manidina tampoka noho ny hatairana.
Nahazo saitoh ianao avy amin'ny tranokalanao manokanaary ny facebook-nao, mba hijanonanao talanjona amin'ny fiheverana amin'ny antsipiriany entin'ity artista ity amin'ny sanganasany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ireo sary sokitra marefo an'ny bibikely vita amin'ny volotsangana